मार्चमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
निसेको ग्रान्ड हिराफु स्की रिसोर्ट, होक्काइडो, जापानमा शर्टबोर्डमा रूखमा राखिएको पिस्टमा स्नोबोर्डिंग गर्ने सामान्य दृश्य
जापानी द्वीपसमूह हरेक मार्चमा जाडोदेखि वसन्तसम्मको संक्रमण अवधि प्रवेश गर्दछ। मौसम अस्थिर छ र हावा वर्षको यस समयमा बलियो छ। होक्काइडोमा पनि तापक्रम बिस्तारै बढ्नेछ र तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ वसन्त नजिकै आउँदैछ। जे होस्, होक्काइडोमा तपाईंले चिसो मौसम काउन्टरमा उपेक्षा गर्नुहुन्न। मार्चमा पनि हिउँ प्रायः होक्काइडोमा पर्छ। मार्चको अन्त सम्म, हिउँ भन्दा बढी वर्षा हुनेछ। जे होस्, निसेको जस्ता स्की रिसोर्टहरूमा तपाईं हिउँको संसारको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म मार्चमा होक्काइडो मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। यस लेखले धेरै तस्विरहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई होक्काइडोको मार्च मौसम कल्पना गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तल मार्चमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
मार्चमा होक्काइडोको बारेमा प्रश्न र उत्तर
मार्च मा होक्काइडो मा मौसम (अवलोकन)
मार्चको सुरूमा होक्काइडो मौसम
मार्चको मध्यमा होक्काइडो मौसम
मार्चको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा मार्चमा हिउँ पर्दछ?
मार्चमा पनि होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ तर वसन्त बिस्तारै आउँदैछ। तपाईं निसेको, आदिमा जाडो खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, तर शहरी क्षेत्रहरूमा यस समयमा अधिक न्यानो दिनहरूको साथ हिउँ पग्लिन थाल्नेछ।
मार्चमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ?
मार्चमा होक्काइडो अझै जाडोको बीचमा छ। यो बिस्तारै तातो हुँदै जान्छ र हिउँ पग्लन्छ, तर जाडोको लुगा आवश्यक छ किनकि कम तापक्रम अक्सर फ्रिजभन्दा तल हुन्छ।
होक्काइडोमा मार्चमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ?
मार्चमा होक्काइडोमा, तपाईंलाई पहाडी क्षेत्र बाहेक जनवरी वा फेब्रुअरी जस्ता गम्भीर हिउँदको लुगाको आवश्यक पर्दैन। जहाँसम्म, तपाईंलाई टोकियो वा ओसाकामा लगाउने कपडा जस्तै हिउँदको लुगा चाहिन्छ। जापानमा जाडो को लुगाहरु को लागी, कृपया तलको लेख मा हेर्नुहोस्
यदि तपाईं हिउँदमा चिसो परिदृश्यको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी भ्रमणका लागि उत्तम महिनाहरू हुन्। यद्यपि तपाईं हिमाली खेलकुदको आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ, हिड्समा निसेको जस्ता। सप्पोरो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा पनि, थुप्रै ठाउँहरू छन् जहाँ हिउँ थुप्रिएको छ। Biei, Furano, Asahikawa, आदि बाट, तपाईं अद्भुत हिउँ पहाडहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
मार्चमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: मार्चमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ, मार्चमा तापमान बिस्तारै बढ्नेछ। तथापि, कोट अझै आवश्यक छ किनकि तापमान अझै कम छ।
मार्च,, २०१:: पुरानो होक्काइडो सरकारी कार्यालय साप्पोरो, जापान = शटरस्टकमा
मार्चमा, तापक्रमका दिनहरू १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढि होक्का हुँदै जाँदा, होक्काइडोमा पनि। होक्काइडोमा, जहाँ अधिकतम तापक्रम फेब्रुअरीसम्म 10 डिग्रीको आसपास थियो, मानिसहरूलाई वसन्त आउँदैछ जस्तो लाग्न थाल्छ। किनभने जाडो विशेष गरी लामो र कडा छ, मानिसहरू नजिकैको वसन्तको बारेमा उत्साहित छन्। यद्यपि, चिसो मौसम अझै जारी छ। दिनहरू हुनु कुनै असामान्य कुरा होइन जब मध्य रातमा बिहान सब भन्दा कम तापक्रम negative डिग्री वा कम नकारात्मक हुन्छ।
यस तरीकाले, मार्चको मौसम अस्थिर छ। त्यसोभए, यदि तपाइँ यस समयमा होक्काइडोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया तपाइँको जाडोका लुगाहरू नभुल्नुहोस्। विशेष गरी मार्चको मध्यमा, तपाईं अझै यो मिडविन्टर छ कि लाग्न सक्छ। यदि तपाईं स्कीइ and र स्नोबोर्डि as जस्ता जाडोका खेलहरूको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई होक्काइडोमा स्की रिसोर्टहरूमा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यो निसेको जस्ता स्की रिसोर्टहरूमा जाडोको बीचमा नै छ। मार्चमा, टोकियो, ओसाका आदिका मानिसहरु चेरी ब्लासमसको कल्पनामा उत्साहित छन् जुन चाँडै फूल्नेछ। यद्यपि होक्काइडोमा चेरी फूलहरू अझसम्म फूल्दैनन्।
होक्काइडोको मौसम टोकियो, ओसाका आदिका भन्दा बिलकुलै फरक छ।
जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले मार्चमा होक्काइडोको मौसम निम्न घोषणा गरेको छ। अधिक जानकारीको लागि कृपया यसलाई सन्दर्भ बनाउनुहोस्।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (मार्चको सुरूवात)
साप्पोरो 2.0 ℃ (-5.0 ℃) 24.5mm (37 सेमी)
ओटारु 1.7 ℃ (-4.5 ℃) 29.9mm (45 सेमी)
Asahikawa 0.2 ℃ (-9.3 ℃) 19.9mm (45 सेमी)
Biei -0.9 ℃ (-13.1 ℃) 14.5mm (52 सेमी)
फुरानो -0.3 ℃ (-12.0 ℃) 14.7mm (48 सेमी)
Wakkanai -0.7 ℃ (-5.6 ℃) 14.5mm (38 सेमी)
अबाशिरी -0.5 ℃ (-8.2 ℃) 12.0mm (25 सेमी)
उटोरो -1.5 ℃ (-9.0 ℃) 21.2mm (49 सेमी)
नेमुरो -0.1 ℃ (-6.2 ℃) 11.3mm (20 सेमी)
Kushiro 1.1 ℃ (-7.5 ℃) 13.1mm (15 सेमी)
ओबिहिरो 1.7 ℃ (-9.3 ℃) 11.2mm (15 सेमी)
Hakodate 3.3 ℃ (-4.3 ℃) 20.2mm (27 सेमी)
मार्च,, २०१5,2019: अज्ञात व्यक्तिहरू निसेको माउन्टमा स्की खेलिरहेका थिए। रिसोर्ट ग्रान्ड हीराफु निसेको, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा
मार्चको सुरूमा केही तातो दिनहरू छन् तर होक्काइडो अझै पनि धेरै जाडो छ। अझै हिमवृष्टि छ त्यसैले चिसोको बिरूद्ध सावधानी अपनाउनुहोस्।
निसेको र अन्य स्की रिसोर्टहरूमा, तपाईं यस समयमा पनि जाडो खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
मार्चको सुरूमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :6:०05 र सूर्यास्त समय १ 17:२:28 वरिपरि हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :5: 49 is र सूर्यास्त समय करिब १ 17:११ हो।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (मार्चको मध्य)
साप्पोरो 4.1 ℃ (-2.6 ℃) 26.0mm (33 सेमी)
ओटारु 3.8 ℃ (-2.5 ℃) 29.9mm (33 सेमी)
Asahikawa 2.7 ℃ (-6.0 ℃) 18.2mm (35 सेमी)
Biei 1.5 ℃ (-9.3 ℃) 15.6mm (47 सेमी)
फुरानो 2.3 ℃ (-8.1 ℃) 18.1mm (42 सेमी)
Wakkanai 1.4 ℃ (-3.2 ℃) 17.9mm (33 सेमी)
अबाशिरी 1.8 ℃ (-5.3 ℃) 15.5mm (21 सेमी)
उटोरो 1.1 ℃ (-6.1 ℃) 23.1mm (39 सेमी)
नेमुरो 1.8 ℃ (-4.1 ℃) 17.8mm (16 सेमी)
Kushiro 2.8 ℃ (-4.5 ℃) 19.6mm (14 सेमी)
ओबिहिरो 4.2 ℃ (-5.5 ℃) 11.5mm (12 सेमी)
Hakodate 5.4 ℃ (-2.3 ℃) 18.5mm (15 सेमी)
मार्च १०: हाकोडाटे शहर ट्राम, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
मार्च १,, २०१:: हिउँले छोपेको जाडोमा सेतो हिउँमा चम्किलो आकाश = शटरस्टकमा हिड्नको लागि जोडी छ
मार्चको मध्यमा, हिउँ मुख्य शहरहरूको बीचमा धेरै पग्लन्छ। सडकमा पिघलिएको हिउँबाट धेरै पानी आउँछ। त्यसोभए तपाईं हिउँ जुत्ता वा जुत्ता लगाउनु पर्छ जसले पानीबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
जहाँसम्म, यदि तपाईं एक ठूलो पार्क वा जंगल जानुहुन्छ, तपाईं अझै सुन्दर हिउँ प्रकृतिबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
मार्चको मध्यमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :5::48 र सूर्यास्त समय करिब १:17::40० हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :5::31 हो र सूर्यास्तको समय लगभग १:17: is23 छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (मार्चको अन्तमा)
साप्पोरो 5.8 ℃ (-1.2 ℃) 27.3mm (28 सेमी)
ओटारु 5.3 ℃ (-1.1 ℃) 24.2mm (29 सेमी)
Asahikawa 4.6 ℃ (-3.9 ℃) 15.9mm (31 सेमी)
Biei 3.3 ℃ (-6.9 ℃) 14.0mm (42 सेमी)
फुरानो 4.2 ℃ (-5.5 ℃) 16.3mm (35 सेमी)
Wakkanai 2.8 ℃ (-1.8 ℃) 17.9mm (31 सेमी)
अबाशिरी 3.3 ℃ (-3.4 ℃) 16.1mm (21 सेमी)
उटोरो 2.4 ℃ (-4.2 ℃) 27.5mm (42 सेमी)
नेमुरो 3.1 ℃ (-2.6 ℃) 23.4mm (15 सेमी)
Kushiro 4.1 ℃ (-2.9 ℃) 25.5mm (15 सेमी)
ओबिहिरो 6.1 ℃ (-3.6 ℃) 19.7mm (15 सेमी)
Hakodate 7.1 ℃ (-1.2 ℃) 20.6mm (11 सेमी)
मार्च २२nd २०१ 22 मा, होक्काइडो = शटरस्टकमा निसेको स्की क्षेत्रको प्रवेश
मार्च २ 29 २०१ 2016: दिउँसो सूर्यास्त हुनुभन्दा अघि हाकोडाटे हार्बर, हकोडाट, होक्काइडो = शटरस्टक
मार्चको अन्तमा, हिउँ मूलतः प्रमुख शहरहरूको बीचमा हराउँछ। जे होस्, जाडोको मौसम जापानको समुद्रबाट आउँदछ, यसले अझै ठूलो हिउँ पर्न सक्छ।
यो दिनको समयमा तातो हुन्छ तर बिहान र बेलुका यो एकदम चिसो हुन्छ, त्यसैले एक कोट आवश्यक छ।
निसेको जस्ता स्की रिसोर्टहरूमा, सडकमा लगभग हिउँ छैन, तर ढलान राम्रोसँग मर्मत गरिएको छ। तपाईं स्कीइंग र अधिक आनन्द लिन जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
मार्चको अन्तमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव 5::30० र सूर्यास्त समय लगभग १:17::52२ हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :5: 13 is र सूर्यास्त समय करिब १ 17:११ हो।